कहीँ कतै तपाई त हुनुहुन्न डिहाइड्रेशनको शिकार ? देखिन्छ यस्तो समस्या हरु बेलैमा बिचार गरौ… – News Nepali Dainik
कहीँ कतै तपाई त हुनुहुन्न डिहाइड्रेशनको शिकार ? देखिन्छ यस्तो समस्या हरु बेलैमा बिचार गरौ…
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ समय: १३:२७:३१
यदि तपाईं कम पानी पिउनुहुन्छ भने, तपाईंलाई डिहाइड्रसनको समस्या हुन सक्छ। यो होइन कि तपाईं केवल थोरै पानी पिएर तिर्खा महसुस गर्नुहुन्छ। यस कारणले शरीरलाई धेरै समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिसको शरीरमा ६० प्रतिशत पानी पाइने गर्द छ। । जब यो डिहाईड्रेसनको कुरा आउँछ, यो शरीरको पानीको १.५ प्रतिशत भन्दा कम हो। तर यो कम भए पनि, यसले तपाईंलाई धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू दिन सक्छ।
अक्सर मानिसहरूले कामको बोझले पानी पिउन बिर्सन्छन् र यस कारणले उनीहरूको सास दुर्गन्धीत हुन्छ । धेरै व्यक्तिहरू यसलाई बुझ्दैनन् र जब तिनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग नजिक हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो साथीको नजिकै गएर बोल्न सक्दैनन् । किनकि तिनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको सास गनाउँछ ।
चिनी र कार्बोहाइड्रेट खानाको बानी
कम पानी पिउँनाले तपाईं चिनी र कार्बोहाइड्रेट जस्ता धेरै पदार्थ खान शुरू गर्नुहुन्छ। यसको मुख्य कारण यो छ कि जब तपाईं कम पानी पिउनुहुन्छ, तब शरीर व्यायाम वा कुनै शारीरिक काम गर्दछ, तब शरीरको संरक्षित कार्बोहाइड्रेट तुरुन्तै कम हुन्छ, जसको लागि शरीर कार्बोहाइड्रेटको माग गर्न थाल्छ। अधिक कार्बोहाइड्रेट सेवनले मोटापा, मधुमेह जस्ता समस्या निम्त्याउँछ।
छालामा रुखोपन देखिन थाल्छ
कम पानी पिउँदा छालाको ड्राईनेन्स बढ्छ। यसको कारणले छालाको चमक कम हुन थाल्छ। जब शरीर भित्रबाट हाइड्रेटेड हुँदैन, तब यस बाहिर लागू कुनै पनि छाला हेरचाह उत्पादन लाभदायक हुँदैन। दैनिक व्यायाम गर्ने व्यक्तिहरूले अधिक पानी पिउनु पर्छ।
मांसपेशी ऐंठन हुन सक्छ
कम पानी पिउँदा, शरीरमा पानीको अभाव हुन्छ, जसको कारण शरीरमा रक्त संचार प्रभावित हुन्छ। रक्त संचार विघ्नित हुँदा मांसपेशिहरुमा ऐंठनको जोखिम बढेको छ। कसरत वा खेलमा अत्यधिक पसिना पोटासियम र सोडियमको अभावका कारण पनि ऐठन हुन सक्छ।
कब्जको समस्या बढ्न सक्छ
खानपान पछि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि शरीरलाई आफ्नो पाचन र पाचनका लागि धेरै पानी चाहिन्छ। जब शरीरमा कम पानी आउँछ भने कब्जको समस्या पाचन पछि सुरु हुन्छ। अधिक पानी पिउँदा कब्जको समस्या निको हुन्छ, यो भन्न सकिदैन। कहिलेकाँही यो डाइटमा फाइबरको कमी वा औषधि सेवनको कारण पनि हुन सक्छ।
Last Updated on: February 12th, 2021 at 1:27 pm